Factory - China Keychains Abakhiqizi futhi abahlinzeki
Ama-Keychains & Key Rings yizipho ezinhle ezingasetshenziswa kabanzi ekukhangiseni, ekwenyuseni, isikhumbuzi se-premium nokuqoqwa, Ingenye yezindlela ezisebenzayo zokukhulisa ukubonakala kwe-BRAND. Izipho Ezicwebezelayo zinikeza uhla oluphelele lwama-Keychains & Rings Key angokwezifiso, angenziwa nge-Brass, i-Iron, i-zinc alloy noma i-metal ne-acrylic, insimbi ehlangene nesikhumba, futhi i-silver sterling nayo iyinhlangano yokufunwa okuphezulu. I-logo ingenziwa ngombala o-flat futhi ingenziwa ngokubukeka okuphezulu nokusikwa kwangaphakathi, imibala ehlukahlukene iyatholakala: umbala ojwayelekile we-PMS, umbala osobala, umbala we-glitter, ukukhanya ngombala omnyama futhi nombala obucayi wokushisa, njll. Kungakhathalekile ukuthi iziphi izikhiye zokhangiso nezindandatho zokhiye ozifunayo, Izipho Ezihle Ezicwebezelayo zizokwanelisa! Xhumana nathi ku-sales@sjjgifts.com njengamanje ukuthola owakho ama-Keychains & Rings Key.
Ikesi Le-Aluminium Pill nge-Keychain
Ama-Keychains wozimele wesithombe
China Factory Bottle ngesivuli Keychain Mercedes B ...
Izikhiye Zama-Cast Pewter
Ama-Keychains we-Poker Chip
Inqola yemali Keychains